Covid-19 ကူးစက်ခံရရင် ဘယ်သူတွေမှာ အန္တရာယ်များနိုင်သလဲ ? – Good Health Journal
Covid-19 ကူးစက်ခံရရင် ဘယ်သူတွေမှာ အန္တရာယ်များနိုင်သလဲ ?
အသက် ၆၅ နှစ်ကျော်သူ၊ ကင်ဆာ ရောဂါရှိသူ၊ သွေးတိုးရောဂါရှိသူ၊ အဆုတ်ရောဂါရှိသူ၊ ဆီးချိုရောဂါရှိသူ၊ နှလုံး ရောဂါရှိသူ၊ စိုးရိမ်စိတ်များသူ၊ ခုခံအား စနစ်ကျဆင်းသူနဲ့ ခုခံအားစနစ်အတွက် ဆေးဝါးမှီဝဲနေရသူတွေမှာ COVID-19 ကူးစက်ခံရရင် အသက်အန္တရာယ်အလွန် များပါတယ်။ COVID-19 ကြောင့် သေဆုံးသူတွေက ရောဂါဖြစ်သူရဲ့ ၃-၄ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်လို့ သိရပေမယ့် နှလုံးရောဂါအခံရှိသူတွေမှာ သေ ဆုံးနှုန်းက ၁၀.၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိ တယ်လို့ WHO မှ ဖော်ပြချက်အရ သိရ ပါတယ်။ အဆုတ်ရောဂါအခံရှိသူတွေမှာ သေဆုံးနှုန်းက ၆.၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။
COVID-19 ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အလွန်အမင်းရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ် ပေါ်လာပါတယ်။ ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စဉ်က နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရတာရဲ့ အဓိကအ ကြောင်းရင်းပါ။ ရောင်ရမ်းမှုကြောင့် သွေးကြောထဲမှာရှိတဲ့ အဆီအနှစ်တွေ ကနေ သွေးခဲဖတ်တွေဖြစ်လာပြီး နှလုံး တိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ လေဖြတ်တာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ နှလုံးရောဂါရှိသူတွေမှာ သွေးတိုးတာ၊ သွေးထဲ ကိုလက်စထရော များတာ၊ ဆီးချိုရောဂါနဲ့ အဆုတ်ရောဂါ တွေပါ ရှိတတ်တာမို့ အဲဒီရောဂါတွေ ကြောင့် ခုခံအားစနစ်က ကျဆင်းပြီးသား ဖြစ်နေပါတယ်။ COVID-19 ရဲ့ လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ အဖျားတက်တာကလည်း နဂိုအားနည်းပြီးသား နှလုံးပေါ်မှာ ပိုပြီး ဒဏ်ပိနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နှလုံးနဲ့အဆုတ်ဟာ တစ်ခု နဲ့တစ်ခု ဆက်သွယ်နေပါတယ်။ အဆုတ် ရောင်ရောဂါကြောင့် အသက်ရှူသွင်းရှူ ထုတ်မြန်တဲ့အခါမှာ နှလုံးခုန်နှုန်းကလည်း အလိုအလျောက်မြင့်တက်လာပါ တယ်။ သင့်နှလုံးက နဂိုကတည်းက အား နည်းပြီးသားဖြစ်နေရင် ဒါမှမဟုတ် သွေး ကြောတွေ ပိတ်ဆို့ပြီးသားဖြစ်နေရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲ သွေးလှည့်ပတ်မှုအတွက် ပိုမိုပြီး အလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက် Heart Failure ရပြီး သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။
ရင်ကျပ်ပန်းနာ၊ ဓာတ်မတည့်တာ၊ နာတာရှည်အဆုတ်ရောင်ရောဂါလိုမျိုး အ သက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်လွန်းတာကြောင့် အ ဆုတ်ပျက်စီးနေသူတွေမှာလည်း COVID-19 ကြောင့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုး တွေ များစွာရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအဆုတ် ရောဂါအခံရှိသူတွေမှာ သာမန်တုပ်ကွေး ရောဂါ၊ အအေးမိရောဂါလိုမျိုးဖြစ်ရင် တောင်မှ ဆေးရုံတက်ရတဲ့အဆင့်အထိ ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေရဲ့ ခုခံအားစ နစ်က ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုက်ထုတ်ဖို့ အ လွန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗိုင်းရပ်စ် တွေက သွေးတွင်းသကြားဓာတ်များလွန်း တဲ့အခါမှာ ပြန့်ပွားနှုန်းမြန်ဆန်ပါတယ်။ ဆီးချိုဝေဒနာရှင်တွေက ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခု လုံးမှာ ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စဉ်များလွန်းတာ ကလည်း COVID-19 ကူးစက်ခံရရင် အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ အချက်တစ် ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးကင်ဆာ၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစား ထိုး ကုသခံထားရသူ၊ လင်ဖိုးမားရောဂါတွေ ကြောင့် ကင်ဆာဆေးဝါးမှီဝဲနေရသူ မှာလည်း သူတို့ရဲ့ မူလရောဂါ ဒါမှမဟုတ် ရောဂါအတွက် ကုသရတဲ့ဆေးတွေ ကြောင့် ခုခံအားစနစ်တွေ ကျဆင်းနေတဲ့ အတွက် COVID-19 ကူးစက်ခံရရင် အသက်အန္တရာယ်အလွန်များပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေမှာလည်း လူကြီး တွေလိုမျိုးပဲ နိုဗယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက် ခံရနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေက ပတ်ဝန်း ကျင်လေထုထဲက အအေးမိရောဂါဖြစ်စေ တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ မကြာခဏ ထိတွေ့ ခံနေရတာကြောင့် သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ မှာ ပဋိပစ္စည်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးသားပါ။ အဲဒီထဲက တချို့က အခုအသစ်ထွက်ပေါ် နေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အပေါ် ကာကွယ် မှုရနိုင်တယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကလေးတွေမှာရှိတဲ့ ခုခံအားစနစ်ရဲ့ ဗိုင်း ရပ်စ်အပေါ် တုံ့ပြန်အားက လူကြီးတွေနဲ့ မတူညီတာကြောင့် ရောဂါလက္ခဏာ မတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကလေးတွေမှာ လူကြီးတွေလိုမျိုး နှလုံး ရောဂါ၊ အဆုတ်ရောဂါနဲ့ ခုခံအားစနစ်ကျ ဆင်းတဲ့ရောဂါတွေ မရှိသေးတာကြောင့် လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Ref : everyday health, healthline.com, health.com, foxnews.com, webmd.com, mayoclinic.com
Categories:	Article, WUHAN-CORONA-COVID 19	/ by Good Health Admin March 20, 2020